तपाईंको क्षेत्रमा बाढी आउँदै छ कि ? यसरी थाहा पाउनुहोस् – Online Jagaran
काठमाण्डौं, १८ असार । वर्षायाम सुरु भएसँगै मनसुन सक्रिय भएको छ । अविरल वर्षासँगै देशका केही ठाउँमा डुवान भएको छ । खहरेखोला र नदीहरुमा पानीको सतह बढेको छ । बाढी र पहिरोको जोखिम पनि उतिकै छ ।
तपाईंको घर नजिकै पनि सानाठूला खोला र नदीहरु छन् भने सतर्क हुनेवेला आएको छ । पानीले भिजेको जमिन भासिने र पहिरो जान सक्ने भएकोले त्यसतर्फपनि सचेत हुनु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पूर्वसूचना सेवाले जनाएको छ ।
तपाईंको नजिकैको खोलामा पनि बाढी आउँदै छ कि ? यसरी थाहापाउनुहोस्
१) ११५५ टोल फ्री नम्बरमा असार, साउन, भाद्र र असोज महिनाभरी फोन गर्नुहोस् र सोध्नुहोस् । यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन
२) तपाईं बाढी वा पहिरोको जोखिमयुक्त स्थानमा वा नजिकै हुनुहुन्छ भने मोवाइलमा ११५५ नम्बरबाट ‘सतर्करहनुहोस्’ भन्ने अभिप्रायको एसएमएस पनि आउन सक्छ । यसरी प्राप्त सूचना वरपरका सबैलाई जानकारी पनि गराउनुहोला ।
३) तपाईं मोवाइल, ल्यापटप वा कम्प्यूटरमा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ भने
३) तपाईं मोवाइल, ल्यापटप वा कम्प्यूटरमा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ भने www.hydrology.gov.np भित्र गएर हेर्नुहोस् । त्यहाँ आगामी २४ घण्टासम्मको बाढी भविष्यवाणी अपडेट भइराखेको हुन्छ छ । कुन नदीमा कती बहाब छ, कहाँ कती पानी परिराखेको छ भन्ने जान्न River Watch र Rainfall Watch हेर्नुस् ।
५) वर्षातको समयमा निरन्तर समाचार सुन्ने बानी पनि बासाल्नुसोस् ।
बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सांसदहरुको सुझाव
कर्णाली प्रदेशमा ७० प्रतिशत दुध बाहिरबाट आयात हुँदै
१८ चैत्र २०७७, बुधबार ०६:१४ March 31, 2021 जागरण
९ भाद्र २०७६, सोमबार ०६:५७ August 26, 2019 जागरण